तपाईंले थुप्रै पटक मानिसको मुखबाट ‘प्रेम अन्धो हुन्छ’ भन्ने वाक्य सुन्नुभएको होला । प्रेममा पर्ने मानिसहरु एकअर्काको प्रेमबाहेक केही पनि सोच्दैनन् । उनीहरु न त उमेर हेर्छन् न रुप नै । यस्तै केही भएको छ २८ वर्षका सोफयां लोहो डानडेलसँग । २८ का बेहुला, बेहुली ८२ वर्ष सोफयां इन्डोनेसियामा बस्छन् । २८ वर्षका यी युवक […]
टाइम्स अफ इन्डिया चैत २३ – भियतनामको राजधानी हानोईमा एक जोडी प्रेमी अस्पतालमा भर..
७१ वर्षदेखिको प्रेम : चार मिनेटको अन्तरालमा दुवैको मृत्यु
एजेन्सी लण्डन, चैत २३ – ‘सँगै जिउने सँगै मर्ने’ प्रेममा यो कसम निकै चर्चित छ । ए..
१७ वर्षे प्रेमीसँगै बसेको र उनीमाथि यौन हिंसा गरेको आरोपमा २१ वर्षीया प्रेमिका पक्राउ
एजेन्सी चैत २३ – केरलाको कोतायाममा २१ वर्षीया किशोरीलाई आफ्ना प्रेमीमाथि यौनहिंस..
घरमाथि बरफ जमिरहेको थिएन, पुलिस भित्र गएर हेर्दा भयो यस्तो खुलासा
एजेन्सी चैत १८ – नेदरल्याण्डको गन्ती संसारभरीको उत्कृष्ट पर्यटकीय नगरीमा हुने गर..
स्कूले छात्राको बलात्कारः न्यायाधिसले आरोपीलाई सफाइ दिँदै भने, ‘उनी त्यतिबेला आनन्दित नभएकाले आरोपमुक्त’
एजेन्सी चैत १८ – मेक्सीकेली अदालतले १७ वर्षीयामाथि बलात्कारको आरोप खेपिरहेका एक व्यक्तिलाई आरोपमुक्त गरेको छ । २१ वर्षीय एक व्यक्तिले स्कूले छात्रालाई अपहरणपश्चात् बलात्कार गरेको भनी आरोप लागेको थियो जसलाई मेक्सीकोका न्यायाधिसले सफाइ दिएका छन् । ती व्यक्तिले उक्त क्षणमा आनन्द नलिएको भन्दै न्याधिसले उनलाई आरोपमुक्त गरेका छन् । वा..
जब अजिंगरले खान खोज्यो दुम्सीः काँडैकाँडाले ढाकिँदा यसरी छट्पटियो (भिडियो)
डेली मेल चैत १८ – ब्राजिलको जंगलबाट खतरनाक देखिने अजिंगर जब बाहिर सडकमा निस्कियो तब यसलाई हेर्न मानिसहरुको घुँइचो लाग्यो । वास्तवमा उक्त अजिंगरको शरिरभरी काँडैकाँडा रोपिएकाले निकै खतरनाक देखिएको थियो । उक्त अजिंगरलाई देखेर कुकुर पनि भुक्न थाल्यो । उनको शरिर हज्जारौं काँडाले ढाकिएको थियो जसका कारण पाँच फिट लामो अजिंगर निकै डरलाग्..
तीन सन्तानकी आमाले बेडरुममा खिचिन् यस्तो सेल्फी, जागिरै चट्
एजेन्सी चैत १७ – अमेरिकामा बस्ने एक महिला शिक्षिकाले इन्टरनेटमा आफ्नो सेल्फी पोष्ट गर्दा जागिर गुमाउनु परेको छ । वास्तवमा ३० वर्षीया लिडा फग्र्यूसनले केहि समय अघि आफ्नो बेडरुममा सेल्फी खिचेर त्यसलाई आफ्नो सोसल मिडियामा पोष्ट गरिन् जसका कारण स्कूल म्यानेजमेन्टले उनलाई निलम्बन गरेको छ । लिडा तीन बच्चाकी आमा हुन् र ओउसालेल स्कूलमा ..
आकाशमै आगो लागेपछि विमान दुर्घटनाग्रस्त, तर, सबै बाँच्न सफल (भिडियो)
एजेन्सी पेरु, चैत १६ – पेरुमा भएको ठूलो विमान दुर्घटनाबाट प्लेनमा सवार सबै १४१ जना बाँच्न सफल भएका छन् । समाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएको भिडियोमा पेरुभियन एयरलाइन्सको बोइङ ७३७ विमान फ्रान्सिस्को कार्ले विमानस्थलमा विमानमा आगो लागिरहेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ । यो विमानस्थल राजधानी लिमाबाट १६५ किलोमिटर पूर्वमा रहेको छ । विमान कम्पनीले व..
हराएका साथी जब अजिंगरको पेटमा भेटिए
एजेन्सी इन्डोनेसिया, चैत १६ – खेतमा जाने भनेर निस्किएका २५ वर्षीय अकबर सलुब्रियो आइतबारदेखि हराइरहेका थिए । इन्डोनेसियाका सुलावेसीका निवासी उनी घर नफर्किएपछि चिन्तित बनेका साथीहरुले उनको खोजी गर्न शुरु गरे । तर, फेला पार्न सकेनन् । त्यसको भोलीपल्ट साँझ एउटा निके मोटो अजिंगर सर्प अकबरको घर पछाडि देखापर्छ । अजिंगरको पेटको आकार निक..
यी हुन् संसारका १० सर्वाधिक महँगा जुत्ता, मूल्य थाहा पाउँदा आत्तिनुहोला
एजेन्सी चैत १५ – भनिन्छ, मानिसको व्यक्तित्व थाहा पाउन उसको जुत्ता हेर्नुहोस् । जसका कारण धेरै मानिसहरुले पैसामा मोटो रकम खर्च गर्ने गर्दछन् । आज हामी तपाईंलाई संसारका यस्तो जुत्ता बारे जानकारी दिँदै छौं जुन अहिलेसम्मकै महँगो साबित भए । ब्रोन्ज एयर जोर्डन्स यो जुत्ता वास्तवमा एक मूर्ती हो जसलाई अमेरिकाका मूर्तीकार म्याथ्यू सेन्ना..
यहाँ गोरो बच्चा जन्माउनु अपराध, दिइन्छ मृत्युको सजायँ
एजेन्सी चैत १३ – हरेक आमाबुवाको चाहना आफ्नो बच्चा राम्रो र गोरो जन्मियोस् भन्ने हुन्छ तर संसारमा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ गोरो बच्चा जन्माउनु अपराधसरह मानिन्छ । परम्पराको नाममा भारतमा यस्तो थुप्रै स्थानहरु छन् जहाँ अन्धविश्वासले जरो गाडेको छ । केन्द्र शासित प्रदेश अंडमानमा परम्पराको नाममा जारवा जनजातीका मानिसहरु आफ्नै बच्चालाई मार्..
टाइटानिकसँग जोडिएका १२ रोचक तथ्य, सायद थाहा छैन तपाईंलाई
एजेन्सी चैत १३ – समुन्द्री इतिहासको सबैभन्दा भिषण टाइटानिक दुर्घटनामा १ हजार ५ सय १७ जनाको मृत्यु भएको थियो । टाइटानिक आफ्नो समयको सबैभन्दा महँगो र भव्य जहाज थियो । यो बेलायतको साउथप्टनबाट न्यूयोर्कको यात्रामा निस्किएको थियो । टाइटानिक निकै बलियो थियो र त्यसमा सुरक्षाका निकै उपायको पनि बन्दोबस्त गरिएको थियो । यति हुँदा हुँदै [&h..
उसिनेको अण्डाभित्र हिरा भेटिएको यी महिलाको दाबी
हफिङ्टनपोष्ट डट कम चैत १२ – एक महिलाले उसिनेको अण्डाभित्र हिरा भेटिएको दाबी गरेकी छिन् । हफिङ्टन पोष्टका अनुसार बेलायतस्थित कुम्ब्राकी सेली थम्पसन ब्रेकफास्ट खाँदै गर्दा उनले निकै अचम्मको वस्तु आफ्नो मुखभित्र पाएको बताइन् । जसलाई उनले हिरा भएको दाबी गरेकी छिन् । ‘जब मैले मुखभित्र क्रिस्टलजस्तो वस्तु भएको थाहा पाएँ तब त्यसलाई मैल..
यो आइफोन होइन, विवाहको कार्ड हो
एजेन्सी चैत ११ – विवाहले हरेक मानिसको जीवनमा एक महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ । कोहीले आफ्नो विवाह निकै धुमधामसँग गर्छन् भने कसैलाई साधारण तरिका मनपर्छ । त्यसमाथि केही व्यक्ति यस्ता हुन्छन् कि जसलाई थोरै रचनात्मक हुन मनपर्छ । यसै सिलसिलामा यहाँ दिल्लीका सुरेश र विद्या प्रियंकाको कुरा गरिँदै छ । उनीहरुले आफ्नो विवाहलाई भिन्न बनाउ..
टेक्सास – आफ्नै विद्यार्थीसँग यौनसम्बन्ध बनाएको आरोपमा एक विवाहित शिक्षिका पक्राउ परेकी छिन् । लकहार्ट हाइस्कूल टेक्सासकी शिक्षिका २७ वर्षीया साराह फोल्केसमाथि १७ वर्षीय विद्यार्थीसँग यौनसम्बन्ध बनाएको आरोप लगाइएको हो । उनले २० वर्षसम्म जेल सजाय भोग्नुपर्ने बताइएको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेर खिचेको तस्विरमा समेत उनी हाँसिरहेको देख..
जब आमा छोरा नै प्रेम सम्बन्धमा परे
न्यु मेक्सिको – १८ वर्षपछि पहिलो पटक भेट भएका आमा छोरा ‘गहिरो प्रेम’ सम्बन्धमा परेपछि अप्राकृतिक सम्बन्धको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । ३७ वर्षीया मोनिका मारेसले १८ वर्षअघि आफ्नो छोरा २० वर्षीय कालेभ पिटरसनलाई अनाथालयलाई बुझाएकी थिइन् । तर, जब उनीहरु पुनः भेट भए, परम्परालाई तोड्दै दुवै एक अर्काको प्रेममा परे । उनीहरुको छिमेकीले अप्..
रमाइलो गर्नका लागि कोही साथी नभएपनि फेसबुकमा फोटो हाल्नकै लागि भएपनि के तपाईंलाई साथी चाहिएको छ ? के आफ्ना पूर्व प्रेमी वा प्रेमीकालाई जलाउनका लागि भएपनि अर्को आकर्षक महिला वा पुरुषसँग फोटो खिचेर हाल्न मन लागेको छ ? यस्तै छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्, जापानको एक कम्पनीले तपाईंलाई फोटो सुट गर्नका लागि नक्कली साथी र प्रेमी […]
इन्टरनेटमा यो फोटो आजकाल निकै चर्चित बनेको छ । फोटो कसले र कहाँ खिच्यो भन्ने बारे केही जानकारी उपलब्ध नभएपनि यो फोटोमा एउटा यस्तो वास्तविकता लुकेको छ जुन निकै थोरैले मात्र थाहा पाउन सक्छन् । सबैभन्दा पहिले यो फोटोलाई Imgur मा सेयर गरियो । जसमा मानिसहरुले विभिन्न किसिमका प्रतिक्रिया बर्साए । पहिलो नजरमा यो फोटोमा […]
५५ फिट लामो, ६ बोतल स्याम्पु, सुक्न २ दिन, कमाई ९३ हजार डलर
लामो कपाल महिलाको सुन्दरतालाई थप बढाउने काम गर्दछ । धेरैजसो महिलालाई लामो र बाक्लो कपाल मनपर्छ । यस्तोमा आज हामी तपाईंलाई यस्तो महिला बारे जानकारी दिँदै छौं जसको कपालको लम्बाई सुन्दा चकित हुनुहुनेछ तपाईं । यो महिलाको कपाल विश्व रेकर्डमा दर्ता छ । अमेरिकाको फ्लोरिडामा बस्ने आशा मण्डेलाको कपाल ५५ फिट लामो छ र कपालको […]
यी स्टारले भनिन्–फुर्सदको समयमा बेश्यावृति गर्छु
सर्वियाकी रियालिटी टीभी स्टार सेनाडा नुर्किक आफ्नो पछिल्लो अभिव्यक्तिले संसारभर चर्चामा छिन् । २४ बर्षका सेनाडाले खुलासा गरेकी छिन कि उनले खाली समयमा बेश्यावृति गर्छिन । उनले यो पनि भनेकी छिन कि, उनी सुन्दर पुरुषसँग मात्र सम्बन्ध बनाउँछिन् । हाई प्रोफाइल राजनीतिज्ञ उनका ब्वाय फ्रेन्ड छन् । सर्वियामा बेश्यावृतिको काम गैरकानुनी मा..
जब आकाशबाट झर्न थाले काटिएको मानव शरिर, मानिसहरुमा कोलाहल
निकै व्यस्त सडकमा आकाशबाट काटिएको मानव शरिर झर्न थालेपछि मानिसहरु भयभित भएका छन् । लगभग तीन वर्ष अगाडि सन् २०१४ को जनवरी महिनामा साउदी अरेबियाको जेदाहस्थित मुस्रेफामा एकाएक मानव अंग वर्षिएपछि मानिसहरुमा कोलाहलको स्थिती पैदा भएको थियो । पुलिसले उक्त शरिर प्लेनको ह्विल बेमा फसेका मानिसको शरिर हुनसक्ने अनुमान गरेको थियो । मेट्रो ड..
१७ हजारमा बिक्दै विश्वकै महंगो ‘हिमाली हावा’
जेनेभा – यदी तपाईं स्वीटजरल्याण्ड पुग्नुभएको छ भने त्यहाँ सबैकुरा महंगो छ भन्ने कुरा थाहा होला । हुँदाहुँदा त्यहाँको हावासमेत महंगोमा बिक्री भइरहेको छ । हुनत त्यहाँको हावा निःशुल्क छछ । तर, यदी तपाईंले त्यहाँको हिमालको हावा अर्डर गर्नुभयो भने ठूलो रकम तिनुपर्ने हुन्छ । आल्पस् हिमश्रृंखलाबाट संकलन गरिएको उक्त हावालाई एक लिटरको डब..
महिलाको जिन्समा हस्तमैथुन गरेर गायब भए युवक, फोटो भाइरल
दिल्ली विश्वविद्यालयको श्री राम कलेज अफ कमर्सको एक कार्यक्रममा गएकी मिरान्डा हाउस कलेजकी छात्राले एउटा निकै अचम्मका घटनाबारे वर्णन गरेकी छिन् जुन सुन्दा विश्वास गर्न गाह्रो छ । कार्यक्रममा गायक केकेले आफ्नो प्रस्तुती दिइरहेका बेला भीडमा एक युवकले छात्राको जिन्समा नै हस्तमैथुन गरिदिएको खबर भारतीय संचार माध्यमले उल्लेख गरेको छ । छ..
यी व्यक्तिले अण्डामा मिसाए मानव वीर्य, नतिजा अचम्मित गरिदिने
संसारभरी मानिसहरु अचम्मका अनुसन्धान गर्दै आएका छन् । तर रुसका एक व्यक्तिले जुन प्रयोग गरेका छन् त्यसको जुन परिणाम सार्वजनिक भयो त्यसले सबैलाई अचम्मित बनाएको छ । रुसका एक व्यक्तिले मानव वीर्य र अण्डाको सम्मिश्रणको कस्तो नतिजा आउला भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेका छन् । सबैभन्दा पहिले उनले सूईको माध्यमले आफ्नो वीर्यलाई अण्डामा हालिदिए..